Qunbulad lagu tuuray saldhig ciidan oo ku yaal Galkacyo, iyo 2 dambiile oo la qabtay. – Radio Daljir
Qunbulad lagu tuuray saldhig ciidan oo ku yaal Galkacyo, iyo 2 dambiile oo la qabtay.
Wacaal Daray ah: Galkacyo, Nov 15 – Qaxaa goor dhawayd qunbulad lagu tuuray saldhig ciidan oo ku yaal meel ku dhaw astaanka gawaarida ee magaalada Galkacyo.
Qaraxa ayaan sababin wax khasaare ah aan ka ahayn dhaawacyo fudud oo soo gaaray dad ka agdhawaa halka qaraxu ka dhacay.
2 dambiile oo la sheegay in ay qunbulada tuureen oo baxsad ah, iyo gaarigii ay wateen, ayaa la qabtay, hadana lagu hayaa saldhiga dhexe ee magaalada Galkacyo.
Taliska ciidanka bilayska Galkacyo oo ka waramay qaraxa ayaa sheegay in baaritaan ay ku wadaan 2-da nin ee la qabtay, marka baaritaanku dhamaadana maxkamad la soo taagi doono, ciqaabtii ay mutaystaana la marin doono.
Taliska bilayska ee magaalada Galkacyo ayaa sheegay in amniga magaaladu uu aad u wanaagsan yahay, ayna iska kaashanayaan adkaynta amniga ee magaalada ciidanka bilayska iyo Daraawiishta.
Dhawrkii todobaad ee la soo dhaafay ayaa Galkacyo waxaa ka dhacay falal-dambiyeedyo noocan oo kale ah.
Ciidanka ammaanka oo qabtay hal qof oo la rumaysan yahay in uu danbeeyey bam gacmeed caawa lagu bar koontarool.
Galkacyo, Nov 15 – Ciidamada ammaanka ee magaalada Galkacyo ayaa gacanta ku dhigay hal qof oo la rumaysan yahay in uu ka danbeeyey bamboo gacmeed caawa lagu tuuray bar koontarool ah oo ay ciidanku ku baarayeen gadiidka dhaxmaraya magaalada Galkacyo.
Ninka la qabtay oo haatan lagu hayo saldhigga bilesyka ayey ciidanku gacanta ku soo dhigeen isla markii uu dhacay bam gacmeedku, waxaana la weydiinayaa su?aalo ku aaddan ku lug lahaanshihiisa falkaasi.
Weerarkaan bambaano ee caawa lala eegtay goobta ay ciidanku gaadiidka ku baarayeen, ayaa inta la xaqiiyey waxaa ku waxyeelloobay illaa 4 ruux oo labo ka mid ahi ay shacab yihiin sida ay idaacadda Daljir u xaqiijiyeen qaar ka mid ah saraakiisha ammaanka ee magaalada Galkacyo ee maamulka Puntland.
Goobta bambaanada lala eegtay oo ahayd albaabka hore ee isbitaalka guud ee magaalada Galkacyo oo ay tiillay jid-gooyada gaadiidka lagu baarayey ayaa waxaa soo buuxdhaafshay ciidanka ammaanka ee magaalada Galkacyo iyo dadweyne aad u tiro badan oo ka soo qamaamay agagaarka goobta ay wax ka dhaceen, waxaana ay ciidanku kor u ridayeen rasaas ay dadka ku kala cayrinayaan.
Ma jiraan warar faahfaahsan oo si rasmi ah u caddaynaya cidda ka danbaysay falkaan iyo sida ay ugu suurto gashay tuurista bambadaasi maadaama goobtu ay ahayd meel ay dadku ay ku badan yihiin isla markaana ay ku yaalliin meheradaha lagu caweysimo.